Umqhubi: Iplatifomu yokuThengisa yeOrganic yeShishini lakho leMarTech Stack | Martech Zone
NgoLwesibini, Februwari 18, 2020 NgoLwesibini, Februwari 18, 2020 UAJ Kieffer
Sikubudala beenkcukacha ezigcweleyo kakhulu. Ngokuhamba rhoqo kwedatha, nkqu nomthengisi wentengiso yedijithali unokuziva onwabile. Awudingi mpendulo kuyo yonke imibuzo-ufuna nje isitshixo sokuvula ixabiso kwiiphulo nakwiinkqubo zakho. Ufuna inkonzo eyenzelwe wena, ifikeleleke kwaye isebenze ngokufanelekileyo.
Ukwazisa ngeendlela ezintsha zokuKhangela kunye nokwabelana ngeNgcaciso kunye namathuba kwiKhanya lokuKhangela lokuKhangela
I-Conductor ityhila isuti entsha yeempawu zeqonga lethu lokuKhangela lokuKhangela. Iqonga libonelela ngeendlela ezingenakuthelekiswa nanto zokufumanisa ukuba abathengi bafuna ntoni kwi-intanethi ngedatha yokukhangela igama eliphambili kushishino, ixesha lenene lokuzibandakanya kwezentlalo, kunye nezixhobo ezingenamthungo zokwenza umxholo obalulekileyo onika iimpendulo kunye nokwakha ukuthembela kubathengi.
Isixhobo se-SEO esinezixhobo ezininzi kakhulu, uMhloli, yindawo yokuma kwindawo enye yophando ngenjongo zabathengi, izihloko zokukhangela, amagama aphambili, uluvo lwabaphulaphuli, ukuqonda kwabantu, kunye nokhuphiswano lobukrelekrele. Ngokutyhila izihloko zomxholo ezifuneka kakhulu, uMhloli-zincwadi wakunika ukuqonda okungcono kubaphulaphuli ekujoliswe kubo: yintoni abayikhangelayo namhlanje, kwaye baya kuba bejonge ntoni ngomso. Kuninzi okunokukhutshwa apha, ke ngoko uConductor uxhobisa uMhloli kunye nazo zonke izinto ezintsha eziqhubeka nokubonisa amava.
I-Explorer ibeka abathengisi esihlalweni somqhubi ngeefilitha ezintsha ezenzelwe umntu kunye nezokwabelana ngamava awenzelwe wena, ukukhangela kunye neempawu zentlalo ezikhanyisa iimfuno zabathengi kunye neqonga lokwenza umxholo oguqula ukuqonda, lithuba, ukuya kumxholo.
Iifilitha ezenzelwe wena kunye nokwabelana: Idatha ibaluleke kuphela njengokukwazi kwakho ukuyihlalutya ngokusebenzisa ilensi yeshishini lakho. Ngamava onke amatsha okucoca ulwalamano, unokwenza kwaye ugcine iiseti zeefilitha zesiko oza kuzisebenzisa kaninzi, kwaye wabelane ngeefilitha kwiqela lakho.
Iimpawu zoLuntu zaWONKE amagama aphambili: Ukufunda oko kukhangelwa ngumthengi yinxalenye yomfanekiso. Ukuliqonda ngokwenyani ibango labathengi, kuya kufuneka wazi xa bekhangela kwaye kutheni. Ukuzibandakanya kwezentlalo kunokukunceda ekulungiseleleni umxholo wekhalenda elungiselelwe ngaphambi kwexesha.
Qalisa isiCwangciso sakho soMxholo kunye neziqulatho zoMxholo owandisiweyo: Amagqabantshintshi axhobisa abathengisi ukuba benze izigqibo ezingcono kwaye bafikelele kubantu ekujoliswe kubo ngolwazi oluxabisekileyo. Iziqulatho zoMqhubi ziqhuba, zikunika ukuguquguquka ngakumbi ekwenzeni ulwazi olunotyebiso kwisikali kwi-Explorer.
Olona luvo lubalaseleyo lubaluleke njengokukwazi kwakho ukwenza umxholo onentsingiselo kunye nokwabelana ngefuthe. UkuKhangela okuKhanyayo ngoku kubonelela ngeendlela ezilula zokulandela umkhondo, ukulinganisa kunye nokwabelana ngefuthe lokuthengisa kunye namaqela kunye nabachaphazelekayo, ukuze nonke nifumane- kwaye nihlale kwiphepha elinye.
Iindawo zokusebenzela ozithandayo: Yenza kwaye umake indawo yokusebenzela exabisekileyo-eguqukayo, kwiqonga ledashboard-njengeentandokazi zokwabelana ngokukhawuleza nangokulula kumaqela onke, ngaphakathi kweqonga okanye nge-imeyile.
Impendulo yeBhokisi yeMpendulo kwi-Insight Stream: Iimpawu ezibonisa (okanye iibhokisi zempendulo) zimele amathuba okuba uphawu lwakho lubonakale kuGoogle. Umqhubi uyasomeleza Impendulo yebhokisi yobukrelekrele kwi-Insight Stream, kwi-platform yethu yentengiso yeendaba eziphilayo. Hlala ngaphezulu kotshintsho kwibhokisi yeempendulo kwibhokisi yakho, ukuze ungaphoswa kukuqonda okanye ithuba lokufumana izindlu nomhlaba kuGoogle.
Ulwazi olugqithisileyo aluyongxaki kubathengi; ngumba wamaqela wentengiso yedijithali nawo. Umsebenzi weConductor kukuwenza urhwebo ngokwabantu kwaye sikholelwa ukuba indlela yokwenza oko kukuqonda iimfuno zabathengi kunye nokubonelela ngexabiso kwabo bafuna iimpendulo kwi-Intanethi. Isuti yomqhubi weemveliso ze-SEO ihambisa ukuqonda okutyebileyo kubathengi balo naluphi na uphawu, nakweliphi na ishishini kunye nokuxhobisa abathengisi ukuba bathathe inyathelo.
USeth Besmertnik, uMlawuli weCEO kunye noMsunguli weQela
Cwangcisa iDemo yoMqhubi
tags: umqhubiumqhubi wamazweIqonga lokuKhangela lokuKhangelaImixholo emfutshaneurhwebo lwezinto eziphilayoiqongaUSeth Besmertnikamagama aphambili entlalo
U-AJ nguManejala oPhezulu weNtengiso yeMveliso kwi Ukuqhuba. Ukufakelwa okuvela kwihlabathi le-arhente yentengiso, i-AJ ngamaqhinga okuthengisa anomdla wokuvula nokwenza kusebenze ukuqonda kwabathengi.
Ubhengezo olula: Isixhobo sokuXhasa simahla seMidiya yoLuntu